MINISITRA RANDRIANASOLO JEAN JACQUES : « 5000 eo ho eo ireo hahazo famotsoran-keloka »
Efa nilaza ny Filoha Andry Rajoelina fa homena famotsoran-keloka ireo voafonja. 17 octobre 2019
Nanamafy izay ny Minisitry ny fitsarana Randrianasolo Jean Jacques raha nanontanian’ny mpanao gazety nandritra ny fanatrehany ny fivoriambe ara-potoana faharoa nataon’ny solombavambahoaka tetsy amin’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza. Notsipihiny nefa fa tsy hisitraka izany velively ireo mpanao kolikoly avo lenta sy tratra nanodinkodina volam-panjakana na koa nogadraina noho ny fakana an-keriny.
« Efa eo am-pelatanan’ny Filoham-pirenena ny raharaha mahakasika ny famotsoran-keloka. Raha ny vinavinanay, raha tsy misy ny fiovana dia hahatratra eo ho eo amin’ny 5 000 eo ho eo ny hisitraka io famotsoran-keloka io. Tsy ho tafiditra ao anatin’ izany nefa ireo mpanodinkodina volam-panjakana sy mpandroba ny harem-pirenena ary ny mpaka an-keriny mampihorohoro ny vahoaka andro aman’alina », hoy ny fanazavan’ny Minisitry ny fitsarana Jacques Randrianasolo. « Nomena tombontsoa manokana ireo efa be taona nefa voatana any am-ponja », hoy koa ny fanazavany. Nambarany fa voasokajy ho isan’ireo hisitraka ity famotsoran-keloka ity zokiolona maherin’ny 45 na 50 taona. Ho fantatra tsy ho ela araka izany ireo izay hahazo ity famotsoran-keloka avy amin’ny Filoha ity.